Funda ngoSun noJonathon Shwartz kule Ngxoxo Enkulu | Martech Zone
Funda ngoSun noJonathon Shwartz kule Nhlolokhono enkulu
NgoMgqibelo, Januwari 20, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Unyaka nohhafu owedlule Ngenzekile ukuhlala ngaphesheya kwetafula kusuka UJonathon Schwartz ekuqaleni IMashup Camp futhi empeleni bengingazi ukuthi ungubani.
I-CMO yami, UChris Baggott, wamkhomba kimi sabe sesihlala futhi simbuka exoxwa yi-CNET cishe imizuzu engaba ngu-20. Ngahlabeka umxhwele ngaso leso sikhathi. Into yokuqala ayenzile ukungadonseli izibhakela futhi akhulume nababhali abathile ngezihloko ezithile lokho I-CNET wayebhalile nokuthi kanjani Sun wamelwa kabi. Wayebhekene nesihluku phambi kwabo futhi nakanjani akazange adonse izibhakela. Sengibonile abaholi abaningi behlinzeka abezindaba, ngakho-ke lokhu bekukuhle ukubukwa.
Kule ScobleShow hlala phansi ne- URobert Scoble, UJonathon ukhuluma ngeSun, Java, iPhone, Mircrosoft kanye nezinye izihloko zakamuva. Unobungane, unolwazi futhi uvule ngokumangalisayo.
Enye yezingcaphuno ezinhle lapha ukuthi inkomba ehola phambili ye-Sun yempumelelo yinjabulo yabasebenzi babo. UJonathon uyaziqhenya ngama 'boomerangs'… okungukuthi, abasebenzi baseSun abashiyile kodwa manje sebebuyela enkampanini. Ubuye akhulume nabaningi abangahlonishwa kahle laphaya ngeLanga njengentengo yokungena nelayisense. Ubuwazi ukuthi uSun uchitha u- $ 2 billion ocwaningweni nasekuthuthukisweni unyaka nonyaka? Noma ukuthi iJava ilogo yezobuchwepheshe eyaziwa kakhulu kunazo zonke?
Njengochwepheshe wezobuchwepheshe 'okhulele iMicrosoft' ... esebenze njalo ezinkampanini ezinkulu ezakhelwe kumanethiwekhi nakumaseva e-Microsoft, ngicabanga ukuthi impendulo yami kuphela kuJonathon noSun ukuthi empeleni angibazi kahle. Ngise-Indiana… hhayi eSilicon Valley. Angikwazi ukuya emicimbini eminingi yezimboni. Siyinkampani yentuthuko esheshayo esendleleni yesitimela yakwaMicrosoft futhi ngeke yehle noma nini kungekudala… uma kungenzeka lokho. Ngokwami, ngiyathanda LAMP kepha ulwazi lwami ngabo yilokho engikwenze ngedwa ngokusingathwa, ukuthuthukiswa, i-WordPress, ne MAMP. Ngisebenze nezinsizakalo zewebhu zeJava eminyakeni embalwa edlule futhi zisebenze ngokukhazimulayo, kepha asikaze sisebenzise ngoba singasebenzisa futhi insiza yewebhu ngobuchwepheshe beMicrosoft - izinhlelo zethu ezakhelwe phezu kwazo.
Ukuphawula okuvela kumthuthukisi kusayithi likaJonathon kusho into efanayo ... akakwazi ukuzama uSolaris ngoba akuyona nje inketho yokuthi aqale 'ukudlala' ekhaya.
Nawu umbono wami omkhulu onoboya ngeSun. Ngisho lokhu ngenhlonipho efanele, kungani ungabeki imali yabo lapho bekhona futhi ngokukhululekile nangokuxhumana ngokukhululekile namakhasimende e-Enterprise Microsoft ekwakheni kabusha izicelo zawo eJava kuSolaris. Akuyona nje inketho kithi ukuthi sibheke kwenye indawo ukuthola isixazululo… noma ngabe ukonga kusekugcineni komgwaqo, asinaso isikhathi sokushayela phansi kulowo mgwaqo.
Angingabazi ukuthi izicelo zethu zingahle zisebenze kangcono, zikhule kalula, izindleko zethu zingancishiswa, futhi nezinsizakalo zingathuthuka neSun. Kepha sikwenza kanjani lokho ngaphandle kokukhubaza inkampani yethu noma ukubambezela intuthuko edingekayo ukuze sincintisane emakethe yethu? Sinamakhasimende angama-5,000 15,000, abasebenzisi abayi-XNUMX kanye nezigidigidi zokuthengiselana njalo ngekota. Ingabe ezinye izinkampani zenza lezo zinguquko? UJonathon, ngokuzayo uma use-Indianapolis… Ngingathanda ukuba nesidlo sasemini bese ngikuthatha ngiyovakasha enkampanini yethu.
Inothi lokugcina… UJonathon ubuye axoxe ngesipiliyoni sokufa esashintsha impilo yakhe. Ngokujabulisayo, angizange ngidlule kulokho - kodwa ukuba nezingane kube nomthelela ofanayo nakimi. Futhi… ividiyo yaqunywa ekugcineni?
Jan 23, 2007 ku-4: 56 AM
Siyabonga ngamazwana anomusa. Ividiyo iqoshwe ekugcineni. Iteyipu ibe nokwehluleka okukhulu khona lapho ngakho uphuthelwe imizuzwana embalwa nohlobo lokuthi "ngiyabonga, usale kahle". Uxolo ngalokho. Ezingxoxiswaneni ezingaba ngu-800 engizenzile lokho kungokwesithathu kuphela ukwehluleka kwe-tape konakalisa okuthile.
Jan 23, 2007 ku-9: 58 AM
Wow - ngiyabonga ngokuvakashelwa namazwana Robert! Kwakuyinhlolokhono emnandi evule amehlo ami kuSun.